Ọchịchịrị na chi ọbụbọ, atụmanya nke ogologo oge ka ogidi nke ụwa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọchịchịrị na chi ọbụbọ (2020) bu ihe emere nye ihe omuma banyere akwukwo ihe omuma Ogidi nke ụwa, nke Ken Follet kere. Ọ bụ saga malitere na 1989 site n'aka onye edemede Welsh na mwepụta nke Ogidi nke ụwa (Aha Bekee). Mgbe e mesịrị, mbipụta nke Wa na-enweghị njedebe (2007) na Otu ogidi ọkụ (2017).
Akwụkwọ abụọ mbụ nke usoro ihe ndị ọzọ Ọchịchịrị na chi ọbụbọ ewere ọnọdụ na Kingsbridge, obodo akụkọ ifo na England. E setịpụrụ nkeji mbụ na narị afọ nke iri na abụọ, nke abụọ na VIV narị afọ na prequel na 997. N'aka nke ọzọ, Otu ogidi ọkụ lekwasịrị anya n’esemokwu okpukpe ndị tụrụ Europe ụjọ na narị afọ nke XNUMX.
1 Nzube na odide nke Ọchịchịrị na Dawn
1.1 Ihe odide nke Ọchịchịrị na Dawn, dị ka Ken Follet si kwuo
1.1.4 Bishọp Wystan
2 Echiche banyere ọrụ ahụ
3 Banyere onye edemede, Ken Follet
3.1 Di na nwunye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
3.2 Mmalite nke ọrụ edemede ya
3.3 Kpakpando nke ahia ahia ahia
4 Dị akwụkwọ akụkọ akụkọ Ken Follet
4.0.1 Narị Afọ Trilogy
Nkata na odide nke Ọchịchịrị na chi ọbụbọ
Ihe de Anyasị na ningtụtụ na-agba ọsọ n’ime ụbọchị atọ nke afọ 997, na zuru Oge gbara ọchịchịrị na Britain. N'oge ahụ, mwakpo nke Vikings na mwakpo ala nke Welsh nọchigidere mpaghara ahụ mgbe niile.
Na ibé atụmatụ atọ isi odide: monk, nwanyi Norman di na nwunye ohuru batara na England na onye na-ewu ugbo mmiri. Ha na-ezukọ na Kingsbridge, ebe ha ga-eche ihu bishọp anyaukwu nke naanị ebumnuche ya bụ ịbawanye ike ya.
Ọchịchịrị na chi ọbụbọ ...
Ihe odide nke Ọchịchịrị na chi ọbụbọ, dị ka Ken Follet si kwuo
Onye edemede ahụ ekwuola na nyochaa dị iche iche na Ragna bụ àgwà ya kachasị amasị ya. Ya Ọ bụ ada eze mara mma na ọgụgụ isi Norman nwere mmụọ siri ike, luru nwoke na-enweghi obara obara. N'inweghi nkwenye nke ndị mụrụ ya, nwa agbọghọ ahụ kpebiri iso di ya gawa England. Ma mgbe ha ruru ebe ahụ, ọ chọpụtara na ihe adịghị ka ọ tụrụ anya ya.
Ọ bụ onye ọrụ ụgbọ mmiri Bekee nwere nkà, n'ịhụnanya Ragna. Mana ebe ọ bụ nwanyị lụrụ di, ọ bụ n'ezie ihe na-enweghị isi. N'agbanyeghị ịhụnanya na-enweghị atụ ya, Edgar achọghị nkasi obi site na nwanyị ọzọ wee gaa n'ihu na-eche ohere ya na adaeze.
Ọ bụ onye mọnk nwere ọrụ ebumnuche dị ukwuu: ịtụgharị abbey ya ka ọ bụrụ ebe mmụta nke ndị Europe niile masịrị. N'ihi nke a, oru ngo nke ndu ya gbara gburugburu iru isi ulo akwukwo ya ya na ọ́bá akwụkwọ ya na ígwè obibi akwụkwọ ya.
Follet kọwara ya dị ka “otu n'ime ndị ọjọọ kachasị njọ m meworo… To ga-akpọ ya asị nke ukwuu na ị ga-achọ ya nsogbu kachasị njọ ”. Na otu, ọ bụ onye aghụghọ, onye aghụghọ, anyaukwu, ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na enweghị akara ebere ọ bụla. N'ihi ya, naanị nzube Wystan bụ ịbawanye ike ya na nke ezinụlọ ya n'agbanyeghị onye ọ na-aga n'ihu ya, n'agbanyeghị ụgwọ ọ bụla.
Echiche banyere ọrụ ahụ
Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ akụkọ Follet niile, ndị nkatọ na ndị na-ege ntị kụrụ aka - ihe fọrọ nke nta otu olu - ike nko nke akwukwo. Ọzọkwa, ọmarịcha akwụkwọ ahụ onye edemede dere nwetara bụ ihe doro anya n’ihi nkọwa zuru ezu banyere usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na omenala n’oge ahụ.
Ole na ole na-emegide olu na-eme mkpesa banyere akụkọ misogynistic, bujuru akuko nke ahuhu ndi adighi mkpa maka ihe ga-esi na ya puta. N'ụzọ dị iche, nyocha ndị ọzọ na-akọwa na kpọmkwem akụkụ ndị ahụ na-adịghị mma na ndị na-agba ọbara bụ ihe nnọchianya kachasị nke oge etinyere ederede ahụ. Ọ bụ oge siri ike.
Banyere onye edemede, Ken Follet
Kenneth Martin Follett mụrụ na Cardiff, Wales, United Kingdom; na June 5, 1949. N'oge ọ bụ nwata, ọ bịara nwee mmasị n'ịgụ ihe n'ihi na ndị mụrụ ya, bụ́ ndị na-ekpe okpukpe Kraịst, machibidoro ya ikiri telivishọn na ịga fim. Ya na ezinụlọ ya kwagara ebe ahụ London Mgbe m dị afọ iri. N'ebe ahụ, ọ debanyere aha na Mahadum University nke London na 1967 iji mụọ nkà ihe ọmụma.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na 1970, mere a oru ndi N'ezie na malitere ịrụ ọrụ maka South Wales ikwughachi si n'obodo ya. Na mbido 1974 ọ gara Ụtụtụ nke abalị na London, ka oge na-aga, afọ ojuju adịghị ya na ọrụ onye nta akụkọ ahụ. N'ihi nke a, Follet banyere na-ebipụta ụwa na Akwụkwọ Everest wee bido dee akụkọ mbido ya na ngwụcha afọ ndị 70.
Di na nwunye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Na 1968, Follet lụrụ Mary, nwa klas ibe ya na London onye ya na ya rutere ihe na-erughị afọ iri. Mgbe e mesịrị, n’afọ 1984 ọ lụrụ Barbara Hubbard (aha nwata nwanyị), onye otu Labour Party, nzukọ nke Follet jikọtara kemgbe afọ 1970.
Mmalite nke ọrụ edemede ya
N'ime afọ 1970, Follet bipụtara akwụkwọ itoolu n'okpuru aha nzuzo Simon Myles, Martin Martinsen, Bernard L Ross na Zachary Stone. Na 1978, Agwaetiti oke mmiri - Banyere ezigbo aha ya - bụ mmalite nke ọrụ mba ụwa ya. Afọ iri na otu ka e mesịrị, e wepụtara akwụkwọ ahụ nke mere ka ọ bụrụ ahịa kacha mma n'ụwa: Ogidi nke ụwa.
Kpakpando nke ahia ahia ahia
Ewezuga akwụkwọ akụkọ, A mara Follet maka akụkọ na-enyo enyo. N'ime ime mmụọ ikpeazụ a, Isi ihe dị na Rebecca (1982), Ugo nke ugo (1983), Ndagwurugwu Ọdụm (1986) na Nke ejima (1997), bụ ụfọdụ n’ime akwụkwọ ndị a kacha mara amara. N'ezie, ha niile nwere mmegharị ihe nkiri na telivishọn, yana Nnukwu ihe ize ndụ (2001) na Na White (2004).
Dị akwụkwọ akụkọ akụkọ Ken Follet
Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke onye edemede Britain nwere njirimara nke meta-akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ ifo, ka ha na-etinye protagonists ewepụrụ ha n'echiche. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị na-akatọ ide akwụkwọ toro ikwesị ntụkwasị obi Follet na ihe mere eme (nke ndị akụkọ ifo na-akọ). N'otu aka ahụ, ha na-enwekarị nkọwa zuru ezu nke ọma ma buru oke ibu.
N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ibe (dịkwa ugbu a na Ọchịchịrị na chi ọbụbọ) Akụkọ Follet na-eme ọtụtụ itinye aka na ndị na-agụ akwụkwọ. A pụrụ ịhụ àgwà ndị a n'ụdị egwuregwu atọ kachasị ama ama nke onye edemede Cardifian: Ogidi nke ụwa y Narị afọ.
Trilogy nke Narị Afọ
Ihe omuma a na ọnụ ọgụgụ kachasị ire ere na-emetụta ihe omume kachasị dị mkpa na narị afọ nke XNUMX. Usoro a ga - ebido na ihe omume metụtara oke agha na iwu mmachibido iwu na United States (Ọdịda nke ndị Refeyim, 2010). Mgbe ahụ Oge oyi nke ụwa (2012), lekwasịrị anya na Agha Worldwa nke Abụọ mgbe Uzo nke mgbe ebighi ebi (2014) kpuchitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Agha Nzuzo niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Ọchịchịrị na chi ọbụbọ
Ordesa nke Manuel Vilas